छैटौं एजे कप भलिबल सुरु | नुवागी
छैटौं एजे कप भलिबल सुरु
भक्तपुर । आदर्श ज्योति(एजे) सेकेण्डरी स्कुलको आयोजनामा फागुन ३ गतेबाट छैटौं विद्यालयस्तरीय भलिबल प्रतियोगिता सुरु भएको छ ।
खेलको सुरुवात भलिबल खेलका प्रशिक्षक एवं पूर्व निर्णायक सुन्दर श्यामाले खेलका निर्णायकलाई बल हस्तान्तरण गरी गरेका थिए ।
‘भलिबल खेलको प्रर्वद्धन गरौं’ भन्ने मूल ध्येयका साथ भलिबल खेलको नियमित प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता गरी राष्ट्रिय खेलाडीसमेत उत्पादन गर्न सफल विद्यालयले छैटौं आदर्श ज्योति(एजे) कप भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गरेको विद्यालयले जनाएको छ ।
खेलमा छात्रतर्फ जनप्रेमी र एडभान्सबीचको खेलमा एडभान्सले जीत हासिल गरेको छ । खेलमा एडभानसले जनप्रेमीलाई सोझो सेटमा हराएको थियो ।
खेलमा एडभान्सविरुद्ध जनप्रेमीले क्रमशः २५ ः २३ र २५ ः २६ अंक ासिल गरेको थियो । त्यस्तै छात्रतर्फकै खेलमा आयोजक र एजे र जनप्रेमीबीच खेल भएको थियो । खेलमा आयोजक एजेले जनप्रेमीलाई २५ः १९ र २५ः १३ को सोझो सेटमा पन्छाएको छ । यता छात्रातर्फको खेलअन्तर्गत न्यू डायमण्ड र जनप्रेमी, पद्म र थ्री स्टार र जनप्रेमी र आयोजक एजे तथा प्म र एडभान्सबीच खेल भएको थियो ।
खेलमा न्यूडायमण्डले जनप्रेमीविरुद्ध २५ः५, २५ ः २ को फराकिलो अंकले जीत हासिल गरेको थियो । पद्म र थ्री स्टारबीचको खेलमा २५ः१६, २५ः४ को अंकका साथ थ्री स्टारले जीत हासिल गरेको थियो । यस्तै जनप्रेमी र एजेबीच खेल हुँदा २५ः९, २५ः १६ अंकले जनप्रेमी र पद्म र एडभान्सबीचको खेलमा २५ः१९ र २५ः १४ को अंकका साथ पद्मले जीत हासिल गरेको छ ।
प्रतियोगिताअन्तर्गत प्रथम, द्धितीय र तृतीय हुने विद्यालयलाई शिल्ड, मेडल, प्रमाणपत्रका साथै नगद पुरस्कारसमेतको व्यवस्था छ । नगद पुरस्कार अन्तर्गत प्रथम हुने टीमलाई नगद रु. १५,०००, द्धितीय हुने टीमलाई नगद रु. १०,००० र तृतीय हुने टीमलाई नगद रु. ७,००० प्रदान गरिने आयोजक विद्यालयका प्रिन्सिपल कृष्णराम दुवालले बताए ।
प्रतियोगितामा उत्कृष्ट स्पाइकर, उत्कृष्ट सेटर, उत्कृष्ट ब्लकर, उत्कृष्ट सर्भर, प्लेयर अफ दि टुर्नामेन्ट घोषणा गरी पुरस्कृत गर्ने समेत विद्यालयले जनाएको छ । खेल आइतबार पनि जारी रहनेछ ।
छैटौं एजे कप भलिबल प्रतियोगिता भोलिबाट